Wednesday March 28, 2018 - 08:14:20 in Wararka by Super Admin
Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa yeelatay Hoggaan cusub kadib khalalaase dhanka siyaasadda ah oo sanadihii lasoo dhaafay ka jiray inta badan wadanka oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
Xizbiga Talada Haya ee Wadanka Ethiopia ayaa doortay R/wasaare cusub oo uu wadanka Yeesho kadib is casilaadii Hailemariam Desalegn
Habeenimadii xalay ahayd ayaa lagu dhawaaqay in R/wasaare loo Magacay Abey Axmed Cali oo kasoo Jeeda Qowmiyada Oromada ee degta Ethiopia.
Kulamo is daba joog ah oo soo bilawday 11-ka bishan aan ku jirno ee Maarso soona Gabagaboobay habenkii xalay ayay axzaabta 4ta ah ee ku midaysan xisbiga haya talada wadanka Etoobiya ee lagu magacaabo EPRDF waxay Doorteen R/wasaaraha cusub ee wadanka hogaamin doona marxalada soo socota.
Abeey Axmed ayaa uga guuleystay Musharaxiiintii la tartameysay codad gaaraya ilaa 108, halka musharaxa isaga kusoo xigay uu hela 59 cod kaliya.
Ninkan loo magacaabay madaxa golaha wasiirrada waa 42 sano jir soo qabtay shaqooyin kala duwan, waxa uuna heystaa Darajada Korneel oo Militaryga Ethiopia uu kusoo qaatay, sidoo kale wuxuu dowr asaasi ah kulahaa dhismaha Wakaalada sirdoonka Xabashida Itoobiya.
Inkasta oo uu dhalasho ahaan kasoo jeedo qawmiyaha Oromada ee Muslimiinta ah, hada isaga waxaa iska dhalay aabe Muslim ah iyo hooyo Kirishtan ah, Wuxuu kamid ahaa siyaasiyiintii ay saaxiibada dhaw ahaayeen Males Zenaawi R/wasaarihii halaagsamay ee Itoobiya kaas oo taariikh u lahaa dagaalka ka dhanka ah muslimiinta Bariga qaaradda Afrika.
Abeey Axmed R/wasaaraha cusub ee Itoobiya ayaa sanaddii 2007 illaa 2010 wuxuu ahaa Taliyaha ciidamada Saliibiyiinta Itoobiya waana Ninkii maamulayay duullaankii ciidamada Xabashidu ay kusoo qaadeen dalka Soomaaliya.
Taariikh Nololeedka R/wasaaraha cusub ee Itoobiya.
Wuxuu dhashay sanaddii 1976 wuxuu kasoo jeedaa Qowmiyadda Oromada oo badankeed ah muslimiin waa siyaasi ay siyaasadda islasoo galeen rag ubadan Tigree iyo Amxaaro.
Wuxuu ahaa gacanta midig ee Males Zenaawi balse sanaddii 2016 illaa 2017 ayuu hoggaamiyay sirdoonka dowladda Itoobiya oo uu mas'uul ka ahaa gummaadkii lagula kacay muslimiinta kacdoonka ka dhigayay gobollada kala duwan ee wadankaasi.
22 Feb 2018 waxaa loo doortay inuu gudoomiye ka noqdo (Ururka Dimoqraadiga Shacabka Oromo) isagoo badalay gudoomiyihii hore ee ururka Lemma Megerssa, ugu danbeyna xalay ayaa loo doortay inuu Noqdo Gudoomiya xizbiga EPRDF ee talada wadanka haya.
Warbaahinta ayaa sheegaysa in doorashada Ninkan ay ka dhigantahay in markii ugu horraysay uu wadanka madax ka noqdo Nin kasoo jeedo qowmiyadda Oromada oo ah dadka ugu badan ee wadanka dega waxaana kusoo xiga Amxaarada, labadan qowmiyadoodna waxay kacdoon saameyn badan reebay kula jiraan taliska Addis Ababa kajira.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in sababta R/wasaare loogu doortay Nin kasoo jeeda qowmiyadda Oromada ay tahay in lagu damiyo kacdoonka ay muslimiintu ka dhigayaan Gobolka Oromiya.
Awoodaha fulinta ee ugu muhiimsan dowladda Itoobiya waxaa gacanta ku haya qowmiyadaha Tigreega, tusaale ahaan 97% saraakiisha ciidamada melleteriga iyo sirdoonka waxay kasoo jeedaan qowmiyadda Tigreega oo 25-kii sanadood ee lasoo dhaafay wadanka maamulaysay.
Waxaa loo badinayaa in wax isbedel ah uusan R/wasaarahan cusub kusoo kordhin saaxada siyaasadda Itoobiya marka loo eego kacdoonnada socda iyo shakhsiyadiisa oo ah Nin jeebka ugu jiray Nidaamka Tigreega ee wadanka ku amar-taagleenaya.